साग जस्ताे प्रतियाेगितामा मागेरै खेले ! | | Neplays.com
साग जस्ताे प्रतियाेगितामा मागेरै खेले !
By Neplays	 Last updated Dec 3, 2019
खेलाडीलाई राम्रो प्रदर्शनका लागि के चाहिन्छ ? उचित प्रशिक्षण, उचित डाइट, स्तरीय खेल सामाग्री, राम्रो सुविधा आदि । यीमध्ये सबैभन्दा आवस्यक कुरा हो खेल सामाग्री । खेल सामाग्री राम्रो भएन भने उनीहरुको राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा राख्न न्यायोचित हुन सक्दैन ।
यस्तै विडम्बना नेपाली सुटिङमा छ । तीन महिनाअघि नेपाली खेलाडीले प्रशिक्षणका लागि बल्ल सुटिङको रेन्ज पाए । त्यसअघि हप्ताको दुई दिन नेपाली सेनाको सुटिङ रेन्जमा सिमित थियो, नेपाली सुटिङ । चीन सरकारले सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा बनाइदिएको सुटिङ रेन्ज संचालनमा आएपनि नेपाली खेलाडीले केही राहत महसुस गरेका थिए । खेलाडी सामू अर्को समस्या आयो ।
प्रशिक्षणस्थल त राम्रो पाइयो, तर खेल सामाग्री भने पर्याप्त भएन । भएका खेल सामाग्री पनि दुई दशक पुराना । यस्तो अवस्थामा खेलाडीबाट पदकको आशा कसरी गर्न सकिन्छ । अन्य खेलका सामाग्री ल्याउनु जस्तो सजिलो छैन, सुटिङको सामाग्री ल्याउन । हातहतियारसम्बन्धि बनाइएको कडा कानुनका लागि सुटिङका खेल सामाग्री ल्याउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि रक्षा मन्त्रालयसम्मै प्रकृया पुरू्याउनु पर्दछ । त्यतिमात्र होइन, सम्बन्धित देशबाट सामाग्री छुटाउनदेखि यहाँको भन्सारसम्मै झन्जटिलो प्रकृया पार गर्नु पर्दछ ।
नेपाल सुटिङ संघले आफूसँग खेल सामाग्री नभएको जानकारी गराएर धेरै अघिदेखि सामान ल्याइदिनका लागि लबिङ गरेको थियो । तर, आजबाट प्रतियोगिता सुरु भइसक्दा पनि नेपाली खेलाडीले सामाग्री पाउन सकेका छैनन् । सुटिङमा १०, २५ र ५० मिटरका अत्याधुनिक रेन्ज बनाइएको छ । तर, आधुनिक सामाग्री नभएका कारण नेपाली खेलाडीले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् ।
ठूलो विडम्बना त के छ भने २५ मिटरको विधामा नौ जना खेलाडीले सहभागिता जनाउँदैछन् । तर त्यसमा प्रशिक्षण गर्ने पिस्तोल भने एउटैमात्र छ । अनि कसरी आउँछ पदक ? समस्या २५ मिटरमा मात्र होइन । १० मिटर र ५० मिटरमा पनि छ । १० मिटरमा यथेष्ट हतियार छन् । तर, सबै पुराना ।
सन् १९९९ मा नेपालमै भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि ल्याइएको हतियारमा नेपाली खेलाडीले आफ्नो क्षमता देखाइरहेका छन् । यदी नयाँ हतियार हुँदो हो र त्यसमा प्रशिक्षण गर्न पाएको भए नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन पनि राम्रो हुन्थ्यो की । प्रशिक्षक उपेन्द्र थापाले २५ मिटरको इभेन्ट्सका लागि एउटा मात्रै हतियार रहेको जानकारी दिए ।
पहिला नै मगाए पनि आउन ढिला भएकाले खेलाडीले मागेर खेल्नु परेको बताए । उनले भने ‘हामीले सहभागि देशका खेलाडीहरुसँग हतियार मागेका थियौं, कतिले सेटिङ विग्रने भन्दै दिन मानेन् भने पाकिस्तानले दिए पछि हामीले २५ मिटरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पायौं ।’ तयारी र हतियार विना पदकको आशा गर्न नसकिने स्वीकार गरे ।
अन्तरक्रिया गरेर विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस मनाइयो
परिषदकाे निमित्त सदस्य सचिवमा ढकाल र खनालकाे सम्भावना, कहिले पुरा हाेला नेतृत्वकाे…
नयाँ ऐन लागूसँगै सदस्यसचिव सिलवालसहित अरु पदाधिकारी पनि पदमुक्त
खेलकुदकाे नयाँ ऐनले खेलकुद नेतृत्व अन्योलमा, विवादित बुँदामा प्रष्ट नहुँदासम्म काममा…
मुलपानी सहित चार स्थानकाे मैदान निर्माणका लागि परिषदद्वारा टेन्डर आह्वान
खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मा हट्दै, नयाँ मन्त्रीकाे छिनाेफानाे चाँडै…